पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल राणाको आज विवाहको ५० औं बर्षगाँठ, यसरि मनाउँदैछन् ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल राणाको आज विवाहको ५० औं बर्षगाँठ, यसरि मनाउँदैछन् !
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल राणाको आज विवाहको ५० औं बर्षगाँठ, यसरि मनाउँदैछन् !
काठमाडौं। शुक्रबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल राणाको एनिभर्सरी परेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल राणाबीच विवाह भएको आज ५० बर्ष पुगेको छ । आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विवाहको ५० औं बर्षगाँठ मनाउदैछन्।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो वैवाहिक बर्षगाँठ बर्षेनी मनाउँदै आएका थिए । गएको बर्ष उनले एक रेष्टुरेन्टमा पत्नी कोमललाई केक खुवाएर विवाह बर्षगाँठ मनाएका थिए । यस बर्ष भने लकडाउनका कारण परिवारसँग मात्र मनाउदैछन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालिन रथी केन्द्र शमशेरकी माहिली छोरी कोमल राणासँग २०२७ बैशाख १९ गते विवाह गरेका थिए।
विदेशबाट आएकालाई नि:शुल्क सीमकार्ड, दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँ दिइने
आठ सय वर्षपछि पहिलोपटक आज राती आकाशमा देखिने छ यस्तो दृश्य, नेपालबाट पनि हेर्न सकिने